Ripple - izinwele yensimbi. Amathiphu Ukusetshenziswa
Zonke mantombazane engazinzile futhi athambekele ukushintsha. Izolo bafuna izinwele iqonde kahle, futhi manje ufuna ukuba abe curls zikanokusho. Kodwa fashion futhi emi namanje futhi kushintsha njalo. Ukuze wenze isithombe sakho wehlukile, kungenzeka ukusebenzisa thayela ukusiza ukudala kwekhanda isitayela esisha. Ake sicabangele lokho abayikho, amathuba abo kanye nobubi obuthile.
Ripple - inguqulo okhethekile zinyakaze izinwele. Kunezindlela eziningana ukukwenza. Inketho sokuqala sihilela izinwele isitayela master nokucwala okhokhelwayo. Imicu izinwele ezihlanganiswe nge isakhiwo mihlobiso. Ukwakha lezi imicu esetshenziswa zasolwandle kanekalona. Okunjalo samuntu emakhiyubhi iphephile futhi akudingi ukunakekelwa okukhethekile. Ngaphezu kwalokho, kungase kubonise ukuthi isikhathi eside kakhulu.
Eyesibili indlela ihlanganisa ukwenziwa zezinwele bebodwa. Ukuze wenze lokhu, abesifazane basebenzisa thayela okungukuthi, esebenzisa okwenza igagasi transverse izinwele. Lokhu kukhetha ukonga ngaphezulu futhi itholakala zonke intombazane. Ngokulandelayo, sitshelwa ngo sihlole kabanzi indlela yokwenza utjuzhkom yezwakala.
Indlela ukukhetha yensimbi izinwele?
Njalo girl ufuna ukufeza imiphumela esiphezulu esikhathini esifushane. Ukuze wenze inqubo yokudala zezinwele isikhathi ukudliwa futhi okhandlayo, kubalulekile ukukhetha eliphezulu izinwele yensimbi-ribbed.
Into yokuqala ukuba banake ebusweni tekusebenta ayina. Ikhwalithi izingxenye zensimbi ngekusasa incike impilo izinwele zakho. izinto eshibhile elisetshenziswa ukudalwa ayina, ungakulimaza izinwele zakho, ngibenze zomile, ababuthakathaka futhi ziyaqothuka.
A engcono kungaba ukusebenzisa Ceramic umsebenzi ebusweni kokuba enamathela esiliva. Yiqiniso, izindleko thayela kumelwe kwenziwe ezishibhile, kodwa izinga umkhiqizo kanye nempilo izinwele zakho kubaluleke kakhulu. Kufanele kuqashelwe ukuthi Ceramic ukufuthelana ngokushesha okukhulu, ngakho musa ukulinda isikhathi eside futhi njalo uhlole yensimbi izinwele. Ngaphezu kwalokho, ekuseni lapho ngokushesha, kubalulekile njalo ngeminithi isikhathi esiyigugu.
Into elandelayo lapho kufanele sinake lapho ukhetha ayina, kuba phambi isilawuli lokushisa. Izinwele kubaluleke kakhulu. Uma umbuso lokushisa siphukile, izinwele ulahlekelwa umswakama waso kanye kukhanye, futhi iyoba ziyaqothuka phezu omisiwe. Kumele kuqashelwe ukuthi labo thayela iwukuba kube kusebenziseka kalula futhi icwecwe, ukuze kalula kungenzeka Benziwe endleleni.
Izinhlobo Imibhobho esemzimbeni ngoba thayela;
yensimbi Izinwele ukudala kwekhanda yezwakala has amathiphu ambalwa:
Cabanga ngumuphi kubo kungcono ukusebenzisa. Nge umlomo wombhobho ngamunye ungenza amagagasi e letingemasayizi lahlukene. Kodwa esazo zonke izinwele idinga Imibhobho esemzimbeni ehlukene. Uma izinwele zakho kuba brown noma black ngombala, kungcono ukusebenzisa umlomo wombhobho esihle. umlomo wombhobho nge naphakathi wave ekahle naphakathi obuphelele izinwele. Kuleli haircuts Ragged kwekhanda kuyoba olungalungile, ngakho-ke kuhle ukuba okufanayo izinwele obuphelele. Nozzle nge amagagasi amakhulu ngeke ivumelane zonke izinhlobo izinwele, uyisebenzisa ingafinyelela ubukhazikhazi. Isikhathi esining impela abesifazane zisebenzisa izinwele yensimbi-ribbed ivolumu basal. Lolu khetho ngokuvamile okusetshenziselwa izintokazi nezinwele mncane futhi mncane. Ngenxa yokuthi ngobumnene phakamisa curls ngibenze zibukeke aluhlaza futhi obukhulu.
Utyuzhok-ribbed ivolumu kanye kwekhanda elula has a lot of izimfanelo ezinhle:
A ezihlukahlukene nezinamathiselo ikuvumela ukudala izinguqulo ezihlukene zezinwele.
Teflon amapuleti ukuvikela isakhiwo izinwele kusukela kusigaba futhi ukulimala ahlukahlukene.
Uma insimbi yakhiwe mikrokonditsioner, izinwele izobanjelwa zonke izimo zezulu.
ezinsimbini Professional ingasetshenziswa ngokuvamile ngaphandle ukulinyazwa izinwele.
Izinwele yensimbi kunomphumela kancane eziyingozi isakhiwo izinwele ngaphandle dryer izinwele.
Umsuka izinwele yensimbi-ribbed, kanye evamile, has nemiphumela ethile engathandeki eziningana:
Zensimbi ezilula zibe nomphumela ongemuhle izinwele ovuthayo kubo.
Ukungabi khona obuphelele esimisiwe intambo. Nokho, i-wire iDemo atholakala onobuhle amadala. Ngo launderettes ngaphezulu yesimanje esetshenziswa intambo ngezinhlamvu ezihlelwa ngesandla.
umthamo ezinganele zedivayisi.
Uma insimbi kuyinto eside heats isikhathi Cools, kungashiwo ukuthi umkhiqizo enesici.
Uma kungekho isilawuli amandla, izinga lokushisa lingase kungafaneleki izinwele zakho, futhi ushintshe akunakwenzeka.
Indlela yokwenza yezwakala?
Izinwele kwenziwa isitayela corrugation ngezandla silula. Okudingayo - lokhu yensimbi izinwele kanye umlomo wombhobho ekhethiwe. Okokuqala sidinga ukulungisa izinwele isitayela. Bayobizwa kanye wageza. Uma ufuna ukuthola umphumela ezimanzi on izinwele, zisebenzisa Foam noma ijeli i-isitayela. Ngakho, zingu igagasi uzoba uhlaka olucacile futhi izinwele uthole umphumela ezimanzi. Ngakho, behlome ayina, ngizodabula ke zonke zinyakaze. Bamba yensimbi izinwele imicu kudingeka imizuzwana mayelana 7. Uma ufuna ukwakha i-volume impande, ke embossing kuphela phezulu ingxenye kusukela phansi izinwele. Ukulandela inqubo ecwaninga izinwele akudingeki.
abalungisa izinwele Professional kanye stylists ziye zasungula amathiphu ambalwa zendlela yokufinyelela kwekhanda ephelele futhi yini amaphutha ukugwema. Amantombazane asemancane, umnikazi unwele ezingavamile, kwekhanda yezwakala asifanele kakhulu. Ukwenza kube esinembile futhi ugweme imicu elengayo, ochwepheshe batusa ngokuphelele ukugeza izinwele zakho nge imoto ngaphambi laying umphumela ivolumu. Futhi umnikazi izinwele eqinile abangalawuleki ngaphambi kokudala zezinwele udinga ukusebenzisa imikhiqizo isitayela (foam, gel). Ngaphezu kwalokho, insimbi phezu imicu ukugcina isikhathi eside kunaleso 7 imizuzwana ukuze uvikele umphumela.
Ochwepheshe bathi okudingeka uyenze izinwele wakhe yezwakala ku izinwele ihlanzekile futhi yomile. Ngakho-ke ngeke uhlale eziningi isikhathi eside. Uma usebenzisa i-yensimbi izinwele izinwele ezimanzi, ungenza kubo ingozi enkulu noma izishise.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi izinwele isitayela eside kuzothatha isikhathi okuningi. Bekezela futhi uzimisele ukuchitha amahora okungenani amabili. Uma kwenziwe ngendlela efanele futhi ngaphandle kokucabangisisa, kuyobe sekuba i-isikhathi eside kakhulu ukuze ujabulele yi.
Ukusebenzisa amasu ehlukene, ungenza izinguqulo ezihlukene zezinwele. Imibhobho esemzimbeni amancane naphakathi nendawo ukudala "abukhali wave" izinwele, futhi inhloko esikhulu kusiza sifinyelele ezithambile mihlobiso imigqa.
Ngakho, kulesi sihloko sabuka ngokuningiliziwe, indlela yokusebenzisa utjuzhkom-ribbed, yini ngebuhle nebubi kube nokuthi iseluleko ochwepheshe, ukufeza kwekhanda ephelele. Ukunamathela lawa mathiphu alula, uyohlale bheka amazing kanye mad bonke abanye abafana.
Haircut for girls engu-12 ubudala. Amafomu nezinhlobonhlobo zezinwele
Kallos (Botox izinwele): Izibuyekezo
Perming izinwele zibe curls elikhulu: curls amahle ngaphandle kwezinkinga
Haircut for indoda enezinwele ezimfishane naphakathi
Castlevania: Amakhosi Shadow 2 - odlulayo umdlalo ngesiRashiya (phezu PC Xbox 360). Castlevania: Amakhosi Shadow 2. Revelations (IsAmbulo) - Ukudlula
Junction ibhokisi ekhaya wiring
A ahlukene ukudla imenyu ngeviki noma uthole isesimweni
Retro-wiring e indlu yamapulangwe. Wiring ngesitayela Retro: ukufakwa
Iziphuzo ezinamandla ezidakayo - izinkolelo namaqiniso
Anime ezinhle: uhlu alupheli
Iphutha Isihlobo futhi ngokuphelele: izincazelo futhi umahluko
"Lactoflora": yokusetshenziswa, intengo, kanye nokubuyekeza
Viktor Vladimirovich Vinogradov, Russian umhlaziyi tetemibhalo, sezilimi: Biography, umsebenzi